Wararka - tirinta 8 maalmood! S-conning waxay kugu martiqaadeysaa Shanghai CPhI & P-MEC China!
P-MEC China, oo ah bandhig caalami ah oo isku xiraya calaamadaha caalamiga ah iyo shirkadaha caanka ah ee maxalliga ah, ayaa lagu qaban doonaa Shanghai New International Expo Center laga bilaabo Diseembar 16th - 18th 2020. Halkan, waxaad ku arki doontaa badeecooyinka cusub ee ay soo bandhigayaan soosaarayaasha hormuudka u ah qalabka wax soo saarka iyo qalabka baakadaha, u raadi xalka baakadka gadaashiisa dhamaadka.
Kooxda tiknoolajiyada S-conning Ltd.
Muddada ： 16th - 18th 2020
Moodooyinka imminka: Nidaamka S400 ee xawaaraha sare leh & nidaamka calaamadeynta ee saliingaha la tuuro ee la buuxin karo, buul-ka-qaadista, kormeerka laambadda iyo mashiinka keydka.
Maalmahan adduunku wuxuu la dhibtoonayaa COVID-19, baahida degdegga ah ee tallaalka COVID-19, S-conning wuxuu casriyeeyay farsamada calaamadaha saliingaha horay loo soo buuxiyay, wuxuu sare u qaaday xasiloonida waxqabadka, wuxuu dammaanad qaaday soo saaridda mashiinno dawooyin tayo sare leh, isagoo matalaya door muhiim ah oo ku saabsan wax soo saar ballaaran ee tallaalka COVID-19 xilligii gaarka ahaa.
Moodooyinka imminka: S308 Mashiinka Calaamadeynta dhalada wareega wareega ah (Cartridges)
Wax soo saar kasta iyo naqshad kasta oo ka timaadda 'S-conning' waxay ka kooban tahay ixtiraamkeenna sayniska caafimaadka, iyo sidoo kale ku mashquulka tikniyoolajiyadda, xakamaynta adag ee tayada mishiinnada iyo ballanteenna ku aaddan amniga isticmaaleha. Bandhiggan, S-conning wuxuu ku soo bandhigi doonaa kala duwanaansho wax soo saar si loo xoojiyo is-qiimeynteena, sidoo kale waa guga aan la koobi karin ee joogitaanka caalamiga ah.
S-conning Technology Group Ltd, waa mid ka mid ah soosaarayaasha mashiinada ugu xirfada badan, oo la aasaasay sanadkii 2010, oo si gaar ah ugu heelan qalabaynta warshadaysan ee loo yaqaan 'High-end Customized automation and smartization'.
Xarunta shirkaddu waxay ku taal Guangzhou Science City. Warshadu waxay daboolaysaa aag dhan 5200 mitir murabac, oo leh jawi xafiis oo raaxo leh iyo aqoon isweydaarsiyo wax soo saar oo waasac ah. Iyada oo loo marayo shahaadada nidaamka tayada ISO9001 iyo shahaadada CE, waxaan la dhexgalnaa: soosaarka, cilmi baarista iyo horumarinta, iibka iyo adeegga iibka kadib, waxaan siineynaa noocyo kaladuwan oo calaamadeysan / xirasho xirmo iyo adeegyo habeysan oo loogu talagalay daawooyinka, kiimikada maalinlaha ah, cuntada, warshadaha kiimikada, elektarooniga, iyo tubaakada.
Tiknoolajiyada 'S-conning' in ka badan 10 sano oo horumar ah, Diirad saaridda waxqabadka tayada qalabka, adoo raadinaya UEO (Khibrad khibradeed Isticmaalaha), iyo si joogto ah u hagaajinaya naqshadeynta iyo kaamilnaanta alaabada; hal-abuurnimo weligeed socota, jaangoynta caalamiga ah, S-conning waxay heshay dhowr naqshad iyo shatiyada alifaadda, mashiinka saliingaha horay loo buuxiyey & mashiinka calaamadeynta iyo mashiinka wax lagu duubo ee caqliga badan. Bixiyaan alaabada ugu fiican iyo adeegga qotada dheer ee iibka kadib adeegyadeena dhamaadka waa raadinta weligeed ah ee S-conning si joogto ah loola kulmo filashooyinka iyo baahiyaha warshadaha.
Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Top Iyo Labeler Labeler, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,